Sivas Demirspor Club na-emepe Oge ohuru - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region58 SivasSivas Demirspor Club na-emepe Oge Ọhụrụ
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Turkey 0
sivas demirspor club ohuru oge acti
Sivas Demirspor Club 2019-2020 mepere oge. Ihe mmemme Sivas Demirspor Club oge mmeghe Tüdemsaş General Manager na Onye isi oche nke Sivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Railroad-business Union Sivas Alaka Financial Secretary Kemal ọkachamara, ndị otu Sivas Demirspor Club, ndị nkuzi na ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ na ngalaba dị iche iche nke Sivas Demirspor Club gara.
Egburu ndị gburu tupu ememe mmemme nke oge ọhụrụ. Onye isi oche Tüdemsaş na Onye isi oche nke Sivas Demirspor Club Mehmet Başoğlu, bụ onye kwuru okwu n'ememe mmeghe ahụ, kwuru, sịgı m na-ekele ndị niile Sivas Demirspor Club obodo na nkwanye ùgwù na ịhụnanya na onye ọkpụkpọ football, kọmitii ọrụ aka na ndị otu ndị isi oche. Klọb anyị abụrụla ebe egwuregwu dị n'ọtụtụ ngalaba na Sivas ya na nwa amadị ya mgba kemgbe ụbọchị ntọala, 1940, ntinye akụrụngwa maka egwuregwu ndị Turkey na ndị egwuregwu o nwetara. Achọrọ m ka oge ọhụrụ a bụrụ nke ga - eme ihe masịrị ndị obodo anyị ma chee na ị ga - aga n'ihu na-eme nke ọma.
Onye isi okporo uzo ahia-ulo nke Sivas Alaka Ego Secretary Kemal Specialist nke oge ohuru nke egwuruegwu nke Turkey na ndi isi oche Sivas Demirspor ga-aka mma ma na-a ,a nti, ”ka o kwuru.
Sivas Demirspor Club na-eme ememe 75 ya 25 / 12 / 2015 Sivas Demirspor Club adia ya xnumx'inc afọ: Na 75 'Bịaruo Onodi Sivas' Sivas akọwaputa Demirspor Club na 1939 eguzobe na aha TÜDEMSAŞ enweghị adịkwa oge. Ebumnuche bụ ime ka ndị na-eto eto si n'okporo ámá gaa n'obodo ma kwadoo mmepe ahụ na uche. Demirspor Club saịtị na Soccer, Nkata, Volleyball, ịgba mgba, Athletics, Boxing, Taekwondo eme egwuregwu ọzụzụ alaka. N'ụlọ ọgbakọ nke bụ ụlọ akwụkwọ egwuregwu maka Sivas, a rụzuru mmezu mba ụwa n'ọgba mgba. Ndị na-eto eto sitere na Sivas Demirspor na-atụgharị na nrite n'ọtụtụ asọmpi. Egwuregwu Football, ma Sivasspora na klọb ndị ọzọ na-azụ ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu Demirspor'da bụ ndị na-eyi uwe: Njikọ Futbol
Sivas Demirspor Club: Flag a, Mba a bụ Anyị 21 / 07 / 2016 Ndị na-eto eto na-eme egwuregwu nke Sivas Demirspor Club Summer Sports Sports kwuru na mba ha, ọkọlọtọ na usoro onye kwuo uche ya na-achịkwa mba anyị. Ndị na-eto eto na-eme egwuregwu nke gosipụtara mmeghachi omume ha na ọdịnihu ha na onye aghụghọ na-anwa ime udo na obodo nke mba anyị gara ọzụzụ na Turkish Flag. Sivas Demirspor Club summer sports egwuregwu ụmụ akwụkwọ nchịkwa Mehmet Yadigar gụsịrị ọzụzụ ha n'okpuru ọrụ nke ọkara pitch egwuregwu abụọ egwuregwu.
Nzukọ Ezigbo Ọchịchị Sivas Demirspor 19 / 06 / 2019 Railway - İş union Ezigbo Mgbakọ a na-eme n'ụlọ nzukọ ahụ abanyela na otu ndepụta. Tüdemsaş General Manager Mehmet Başoğlu na njedebe nke nhoputa ndi ochichi bu onye isi oche nke Sivas Demirspor Club. Onye isi ochichi nke ndị ntorobịa na ọrụ ntụrụndụ Erdoğan Tunç, Concrete Traves Factory Manager Ali Karabey, TCDD 4. Onye isi Executive Regional Director Cemalettin Gültekin, DemirYol-İş Union Sivas Alaka Alaka Murat Kütük, Nnọchiteanya Egwuregwu Football nke Hayrettin Stars, Ndị nnọchiteanya Amateur Sports Club na ndị òtù Demirspor gara. Nzukọ Ezumezu malitere site na ịmepụta komiti kọmitii n'okpuru nlekọta nke Hayrettin Yıldız, onye nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ Football.
Nzukọ Nzukọ Board nke Sivas Demirspor zutere 06 / 07 / 2019 Sivas Demirspor Club Management Mgbe Ndị Nkịtị General Assembly Tüdemsaş Nuri Demirağ Azụmahịa na-abịa ọnụ. Ná nzukọ mbụ nke ndị nchịkwa nke nzukọ nke ndị isi oche nke onyeisi oche nke Club na Tüdemsaş bụ onye isi nchịkwa bụ Mehmet Başoğlu, e kesara ọrụ. Ndị Sivas Demirspor Club Board na-eme n'ọgwụgwụ nzukọ ahụ, ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọrụ ndị a ga-eme na oge ọhụrụ na usoro ego nke ụlọ ọrụ ahụ ka a tụlere. Site na ndị na-eme egwuregwu na-akwado 800 na 5 dịka alaka dị iche iche, ihe mgbaru ọsọ bụ iji mee ka ụmụaka na ndị na-eto eto gaa egwuregwu ahụ ma nye ha ohere ịme egwuregwu na Sivas Demirspor Facilities na nghọta dị omimi karịa asọmpi asọmpi. Distribution Task bụ şu
Taa na History: 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club malitere. 29 / 10 / 2012 29 October Na 1919 Entente States zụlitere njem ụgbọ elu agha. 15 January-15 April 1920 percent 50 percent, 16 April - 30 1920 percent mụbara n'etiti April 400 ụbọchị. Mgbe ụbọchị a gasịrị, a ga-ekwuputa ya iche iche. 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club guzobere. 29 October 1933 Mwube nke Sivas-Erzurum akara nke 10 Republic. malitere na ncheta. Journal okporo ígwè nke Republic 10. Akara akwụkwọ dị mkpa. 29 October 1944 Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır-Kurtalan ụgbọ okporo ígwè e meghere.
Sivas Demirspor Club na-eme ememe 75 ya
Sivas Demirspor Club: Flag a, Mba a bụ Anyị
Taa na History: 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club malitere.
Taa na History: 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club malitere
A na-akwụghachi ndị na-egwu egwuregwu Sivas Demirspor ụgwọ